XOG:- Uljeedka rasmiga ah ee safarkii madaxweynaha Galmudug uu ku yimid Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Uljeedka rasmiga ah ee safarkii madaxweynaha Galmudug uu ku yimid Muqdisho
Warbaahinta Bulshoweyn ayaa dabagal dheeraad ah ku sameeysay sababta rasmiga ah ee ka dambeysay safarka deg dega ahaa uu maalintii shalay magaalada Muqdisho ugu yimid madaxweynaha cusub ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xuseen (Xaaf), xilli caleemo saarkiisa aanu weli dhicin.
Safarkii deg dega ahaa ee madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xuseen (Xaaf) uu shalay ku yimid magaalada Muqdisho ayaa ku saabsanaa arrinta shirka London iyo cidda rasmiga ah ee Galmudug u mataleysa shirkaas.
Shirka London ka furman doonna 11-ka bishaan May, ayaa waxaa ka qeyb-gali doonna madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadda dalka, waxaana dhinaca Galmudug hore loogu qorsheeyay inuu uga qeyb-galo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Maxamed Xaashi Cabdi Carabeey.
Madaxweyne Axmed Xaaf oo arrintaasi ka hor-tagaya ayaa markii la doortay kadib si deg deg ah kusoo gaaray magaalada Muqdisho, isagoona kadib kullan deg deg ah la yeeshay safiirka dalka UK u fadhiya dalka Soomaaliya.
Kullankaasi ayuu safiirka kaga dalbaday in isaga laga dhigo cidda maamulka Galmudug u mataleysa shirka London, maadaama maamulkaasi uu haatan yeeshay madaxweyne rasmi ah.
Wada-hadal dheer kadib ayaa ugu dambeyn waxaa la isla gartay in madaxweyne Axmed Xaaf uu isaga hoggaamiyo wafdiga Galmudug uga qeyb-gali doonna shirka London ka dhici doonna 11-ka bishaan May ee 2017-ka.